လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဖားများအကြောင်း - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Posted by manawphyulay on January 16, 2013 at 2:50pm
5:22 PM Views: 1184
Tags: Work Like5members like this
Comment by mung san on April 14, 2014 at 12:58pm good Comment by KhinMyoThu on March 30, 2013 at 1:25pm posts တွေလာဖတ်သွားတယ်...အမရဲ့ နည်းပညာတွေ ဗဟုသုတလေးတွေလည်း ရှယ်ပါဦးအမရေ..မျှော်လင့်နေမယ် Comment by KhinMyoThu on March 30, 2013 at 1:24pm အမ မနော ညီမကို add လိုက်ပါဦး. :) Comment by KhinMyoThu on March 30, 2013 at 1:24pm ဖား....... Comment by ကောင်းကောင်း on March 2, 2013 at 11:10pm ကြော်စားလိုက် Comment by Ye` Oo Paing on March 1, 2013 at 11:06pm ကောင်းတဲ့ဖားရောမရှိဘူးလားဗျာ ကြော်စားလို့ရတာလေးပေါ့... Comment by Ap3x on February 4, 2013 at 1:22pm တပတ်တခါလောက် တွေ့တွေ့နေရတဲ့ ဖားကလေးတွေ. Comment by lulu on January 24, 2013 at 7:40pm အဲဒီဖားတွေကိုဘယ်လိုပညာပေ့းရမလဲဆိုတာကိုဆက်ရေးရင်ကောင်းမယ် Comment by AMY on January 24, 2013 at 10:34am လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ ဒီလိုဖားမျိုး တွေက ရှိကိုရှိစမြဲပါ။... Comment by Phyu Sin Kyaw on January 24, 2013 at 10:17am ဖားတွေကလည်း အမျိုးမျိုးပဲနော်။ မူးတောင်မူးသွားတယ်။ :) RSS